ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များအတွက် စေတမန်: မဟုတ်မမှန်သော ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များသို့ (အပိုင်း ၁၆)
ယနေ့ အစိုးရ ဆိုးသွမ်း နေမူအပေါ် မိတ်ဆွေတို့ ဘယ်လိုမြင်လဲ ကျုပ်ကတော့ ဒီမဟုတ်မမှန်သော ဗုဒ္ဓဘာသာ့ကို ကိုးကွယ်လို့သာ ဒီအစိုးရဆိုတာ တည်တံနေတာ.... ဒီနအဖအစိုးရ အာဏာရှည်နေရတာလဲ ဒီဗုဒ္ဓဘာသာကြောင့်ပဲ .. ဒီဗုဒ္ဓဘာသာက ပဲ ဒီအစိုးရကို အာဏာရှည်အောင် တည်တံအောင် ကာကွယ်ပေးနေတာပါ.. .. ပြောရရင်တော့ ကျွန်းကိုင်းမှီ ကိုင်းကျွန်းမှီပေါ့ ဗျာ….
ဟိုအနော်ရထာမင်းလက်ထက်ကတည်းက ကျုပ်တို့နိူင်ငံကို မကိုးကွယ်ဘဲ မနေရဆိုပြီး တိုင်းပြည်အကျပ်ကိုင် မကိုးကွယ်ရင် သတ်ဖြတ်ပစ်တယ်... မိတ်ဆွေတို့ပဲ စဉ်းစားကြည့်ပါ မြန်မာတနိူ်င်ငံလုံး အရည်းကြီး စိုးမိုးနေတဲ့အချိန်မှာ လွယ်လွယ်ကူကူ ဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်သွားမယ်လို့ မိတ်ဆွေတို့ယုံလား ကျုပ်တော့ မယုံဘူး ဒီလောက် မဟုတ်မမှန်သူတို့ကျမ်းကို အတိအလင်းဖော်ပြနေတာတောင် ဒီလောက်လူတွေခေါင်းမာနေကြသေးတာ.. လွယ်လွယ်ကူကူ ဘာသာတခုကနေ တခုကို ပြောင်းဖို့ဆိုတာ တနိူ်င်လုံးအနေနဲ့ ဖြစ်နိူ်င်လို့လား စဉ်းစားပါ ဒီနိူ်င်ငံသွေးမြေကျပြီးမှ ဗုဒ္ဓဘာသာနိူ်င်ငံဆိုတာ ဖြစ်လာရတာပါ.. အနောက်ကနေ ဘုန်းကြီးများ က အစိုးရ၊ မင်းများကို ခေတ်အဆက်ဆက် အနောက်က ကြိုးကိုင် အုပ်ချုပ်နေတာပါ.. နိူ်င်ငံကို အုပ်ချုပ်တာကတော့ အစိုးရပေါ့ ကျုပ်ပြောပြီးပါရောလား စက်တင်ဘာအရေးအခင်းဆိုတာ ဘုန်းကြီးနဲ့ အစိုးရ အာဏာလုတဲ့ပွဲပါ.. အဲ့တာနဲ့ ဒီမိုကရေစီပါလို့ အော်နေတဲ့ ငတုံးမိစ္ဆာဘုန်းကြီးများရဲ့ နောက်လိုက်တွေက ဘာလုပ်လဲဆို အစိုးရက ဘုန်းကြီးများကို သတ်နေပါတယ်။ သာသနာကို ဖျက်ဆီးနေပါတယ်. ဟားဟား ကျုပ်ရယ်မိပါတယ်. အစိုးရ တကယ်ဗုဒ္ဓဘာသာကို တကယ်ဖျက်ဆီးတယ်ဆိုရင်တော့ ၀မ်းသာစရာပေါ့ဗျာ....
ဒီအစိုးရ ဒီဗုဒ္ဓဘာသာရေးရှိနေလို့ သူ့အသက် ရှည်နေတာ သူလုပ်ချင်သလို လုပ်လို့ ရနေတာ ဒီဘာသာကို သူတို့တွေ ကဖျက်ဆီးစရာလားဗျာ.. ဒါကြောင့် နအဖအစိုးရနဲ့ ဘုန်းကြီး ဟာ အတူတူပဲ ဖာသယ်ပါးစပ်ဆိုတာ တကယ်မှန်တယ်ဗျာ.. ဘုန်းကြီးတွေတောင်းထားကို ကျုပ်ကြားမိတယ်။ သူတို့ဘုန်းကြီးတစ်ကောင်ကို ကြိုးကွင်းပစ်ဖမ်းတဲ့ ကိစ္စ အစိုးရ တောင်းပန်ရင် ကျေအေးပါမယ်တဲ့ ဒါသူတို့ပြောတဲ့ စကားနော်.. ကဲကြည့် ဒီမိုကရေစီရဖို့ ပါလား????? ကုန်ဈေးနှုန်းကျဖို့ပါလား ???? ကဲကြည့်စမ်းပါအုံး ဒီအစိုးရက ဗုဒ္ဓဘာသာမဟုတ်ဘူးတဲ့ လုပ်ချလိုက်သေးတယ်။ ခေတ်အဆက်ဆက် မင်းတွေ ယခုလက်ရှိ နအဖတို့ကိုးကွယ် တည်ဆောက်နေတဲ့ စေတီချေးပုံတွေက ဘာတွေလဲ တိုင်းပြည်ဘဏ္ဍာကို လုပ်ချင်တိုင်းလုပ် ပြည်သူကို သေချင်သေပလိမ့်စေ။ နည်းနည်းမှ ပါးစပ်မဟကြတဲ့ ဘုန်းကြီးတွေ အဲဒီကောင်တွေက ဘာကောင်တွေလဲ ဘုန်းကြီးမဟုတ်လို့ ခွေးသူတောင်းစားတွေလား.. ငါတို့ကိုတော့ မလှူကြပါနဲ့ စေတီတွေ ဆက်မဆောက်တော့ပါနဲ့ ယခုလက်ရှိတိုင်းပြည်မှာ ဆင်းရဲငတ်မွတ်နေတဲ့ သူတွေကို ကြည့်ရှုပေးပါလို့ ဘယ်ဘုန်းကြီး တကောင် ပြောဖူးခဲ့သလား.. စေတီတလုံးရဲ့ ဆောက်လုပ်တဲ့ တန်ဖိုးဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတာ သန်းနဲ့ ချီကုန်ကျတယ်ဆိုတာ ကလေးက အစသိတယ်.... ဒါကြောင့် နူ်ိင်ငံခြားသားတွေက ပြောကြတာ မင်းတို့နိူင်ငံပျက်တာလဲ မပြောနဲ့လေ ဒို့ကြည်လိုက်ရင် မင်းတို့နိူင်ငဲံမှာ pagoda နဲ့ solider ပဲ တွေ့ရတယ်တဲ့ ဒီလောက်များမှတော့ မင်းတို့နိူ်င်ငံဘယ်လိုဖြစ်လို့ တိုးတက်နိူ်င်မလဲတဲ့ … ဟုတ်တယ် လူတွေက စစ်သား များတာကို အပြစ်တင်နေကြတယ်..... စေတီတွေများတာတော့ မပြောကြဘူး တိုးတက်တဲ့ နိူင်ငံတွေက တိုက်တာအဆောက်အဦးအကြီးကြီး ဆောက်လုပ်ကြတယ်..... သူတို့နိူင်ငံကြီး တိုးတက်ဖို့ စီးပွါးရေးအနေနဲ့ လုပ်ငန်းများ တစုတဝေးတည်းဖြစ်သွားအောင် ကမ္ဘာကစိတ်ဝင်စားလာစေရန် ဆောက်လုပ်ကြတယ်..... လုတွေလည်း တက်နေလို့ ရတယ် လုပ်ငန်းများလည်း လုပ်ကိုင်လို့ ရတယ်..... ကဲပြောစမ်းပါအုံး ဒီစေတီဆောက်တာ တတ်လည်းနေလို့မရဘူး ဘယ်သူကမှလည်း စိတ်မ၀င်းစားဘူး ကျနော်ကြားမိလိုက်တာတော့ David Copperfield ကတော့ စိတ်ဝင်းစားလိုက်တယ် သူရွှေတိဂုံစေတီကို ဖျောက်ပြမယ်ဆိုပြီး ခင်ညွှန်လက်ထက်မှာ တောင်းတယ်တဲ့ ဒီစစ်အစိုးရက ခွင့်မပြုလိုက်ဘူး အဘယ်ကြောင့်ခွင့်မပြုလဲဆိုတော့ စစ်အစိုးရနဲ့ ဘုန်းကြီးပေါင်းလိမ်ထားတဲ့ ဒီရွှေတိဂုံစေတီက ဘာတန်ခိုးမှ မရှိဘဲ မျက်လှည့်ဆရာ David Copperfield ရဲ့ လက်အောက်မှာ ပျောက်သွားမယ်ဆို ပြည်သူကို သူတို့လိမ်စားထားသမျှတွေ ဘူးပေါ်သလို ပေါ်တော့မယ်လေ.. ဒါကြောင့် ငြင်းဆန်လိုက်ပါတယ်ဗျာ....
ကျနော်မေးဖူးတယ် မင်းတို့ ဒီရွှေတိဂုံစေတီကို ဘာလို့ ကိုးကွယ်လဲလို့ မေးဖူးတယ်.... သူတို့က ဘုရားရဲ့ ဆံခြည်မျင်ကို စေတီအောက် မြှပ်နှံထားတယ်တဲ့ .. သူဆံချည်မျှင်မပြောပါနဲ့ လူတကိုယ်လုံးတောင် ရောဂါဖြစ်လို့ သူတပါး တွဲချီမပေးနေရမှတာ သူဆံချည်မျှင်ကကော ဘာစွမ်းနိူင်မလဲ စဉ်းစားကြည့်ပါအုံး တွေးကြည့်ပါအုံးဗျာ… အဲဆံချည်မျှင်ကလည်း ဂေါတာမရဲ့ ဆံချည်မျှင်ပါလို့ ဘယ်သူက အတိအကျပြောနိူင်လို့လဲ.. တယောက်ယောက်ရဲ့ ဆံပင်ကို မဖြစ်နိူ်င်ဘူးလား ဒီဆံချည်မျှင်က ဂေါတာမရဲ့ ဆံချည်မျှင်ပါလို့ ဘာနဲ့ သက်သေပြမလဲ.. ဒီနိူင်ငံကို မွန်ဘုန်းကြီး ရှင်အရဟံ ကိုဖမ်းဆီးပြီး ခေါ်ဆောင်ခဲ့ရမှ အနော်ရထာမင်းက ရှင်အရဟံရဲ့ စကားတွေ(မှိုင်းလုံးတွေ သိုင်းဝတ္တူဆန်ဆန် စကားတွေ) မှာ နစ်မြောပြီး အရည်းကြီးတွေကို ဖယ်ရှားပြီး ဗုဒ္ဓဘာသာနိူ်င်ငံအဖြစ် တည်ထောင်ခဲ့တယ်တဲ့...... သူတို့ပြောတာ မိုဟာမက်က မိန်းမအများကြီးယူတယ်တဲ့ တမန်တော်မိုဟာမက် ယူတဲ့ မိန်းမက ဗုဒ္ဓဘာသာကို စပြန့်ပွားအောင် လုပ်တဲ့ အနော်ရထာမင်းထက်မများပါဘူးလို့ ပြောပါရစေဗျာ.. ရှင်အရဟံနဲ့အတူ ဗုဒ္ဓ၀င်(သိုင်းဝတ္တူ)ပဲ ပါလာတာ..... ဘယ်နားက ဆံချည်မျှင်တွေ ရောက်လာလဲဗျာ ရှင်းပြပါအုံးဗျာ.. ဒီလိုနှစ်ပေါင်းထောင်ချီကြာပြီးမှ ဒီဆံပင်ကကော တည်၇ှိပါအုံးမလားဗျာ.. (မဟုတ်မမှန်သော ဗုဒ္ဓဘာသာများအတွက် တခုတည်းကို စဥ်းစားစရာမေးခွန်းတွေက အများကြီးပဲ) နောက် ဂေါတာမရဲ့ အစွယ်(ဘီလူးသွား)ရောဂါထလိုက်သေးတယ်...... တရုတ်ဆီက ဘုန်းကြီးတွေက ဂေါတာမရဲ့ အစွယ်ဆိုပြီး လာပြတယ် အဲ့တရုတ်တွေကကော လာလိမ်ညာစားသွားတယ်ဆိုရင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲ .....
ဒါနဲ့ ပြည်သူတွေ ရောဂါထပြီး ကုလားအစွယ်လား တရုတ်အစွယ်လား ဘာလားတော့ မသိဘူးဗျာ ကိုးကွယ်ကြတယ်...... ကိုးကွယ်ပြီးလို့ ပြီးသွားမလားအောက်မေ့တယ် အဲဒီအစွယ်ကို copy ပွားလိုက်သေးတယ်ဗျာ ဟားဟား တကယ်လည်း၇ီဖို့ ကောင်းတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာ…. ဒါကြောင့် ကျုပ်ပြောတာပေါ့ သူတို့တွေရဲ့ အသိဥာဏ်ဟာ ငယ်စဉ်အချိန်ကတည်းက ဘုန်းကြီးတွေရဲ့ မဟုတ်မဟက်သြ၀ါဒတွေကို ခံယူရပြီး ဒါကြီးက ဖြစ်နိူ်င်လား မဖြစ်နိူ်င်ဘူးလား မစဉ်းစားနိူင်တော့ဘူး…… သင်ပေးရင်လည်းတတ်တာပဲ ဒါကြောင့် ဘာသာရေးမှိုင်းလုံးတွေ သူတို့ခေါင်းထဲမှာ မှိုင်းမိနေတာပေါ့… မစဥ်းစားနိူင်ဘူး…. မတွေးတတ်တော့ဘူး…..
Posted by messenger at 2:08 AM
Labels: နအဖနဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာအတူတူပဲ, မဟုတ်မမှန်သော ဗုဒ္ဓဘာသာ